ဘောလုံးလောကမှာ ထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့တဲ့ တိုက်စစ်အတွဲများ (၁)
တစ်ခေတ်တစ်ခါတုန်းက ဘောလုံးလောကမှာ ထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့တဲ့ တိုက်စစ်အတွဲများ (၁)
30 Oct 2018 . 5:54 PM
မော်ဒန်ဘောလုံးလောကမှာ (၄-၂-၃-၁)ကစားကွက် ခေတ်စားလာတာနဲ့အမျှ တိုက်စစ်မှူး (၂)ဦးထား ကစားတဲ့ အသင်းတွေ သိပ်မရှိတော့ဘူး။ အရင်ကဆိုရင် (၄-၄-၂) ကစားကွက်နဲ့ အောင်မြင်မှု ရယူခဲ့တဲ့ အသင်းတွေ အများကြီးရှိပြီး အဲဒီကစားကွက်နဲ့အတူ ထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့တဲ့ တိုက်စစ်အတွဲအဖက်တွေလည်း အများကြီးပါပဲ။ ဒါကြောင့် တစ်ခေတ်တစ်ခါတုန်းက ဘောလုံးလောကမှာ ထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့တဲ့ တိုက်စစ်အတွဲအဖက်တွေကို ပရိသတ်တွေ ပြန် သတိရနိုင်ဖို့အတွက် ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။
Ian Rush & Kenny Dalglish (Liverpool)
လီဗာပူးလ်အသင်း အောင်မြင်မှုတွေကို ပြန်ပြောရင် အီယန်ရပ်ရ်ှနဲ့ ဒဲဂလစ်ရ်ှတို့ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို မေ့ထားလို့ မရဘူး။ ဒဲဂလစ်ရ်ှက ဘောလုံးစွမ်းရည် ပြည့်ဝသူ၊ အီယန်ရပ်ရ်ှက Pace ၊ Finishing Ability ကောင်းသူ။ သူတို့နှစ်ဦးက ၁၉၈၀ ၀န်းကျင်မှာ လီဗာပူးလ်အသင်းအတွက် အောင်မြင်မှုတွေရအောင် ဦးဆောင်ခဲ့သူတွေလို့ ဆိုရမှာပါ။
Alan Shearer & Chris Sutton (Blackburn)
ပရီးမီးယားလိဂ် ခေတ်ဦးမှာ ဘလက်ဘန်းအသင်းအတွက် အမှတ်ပေးချန်ပီယံဆု ရရှိအောင် အတွဲညီညီ ခြေစွမ်းပြခဲ့သူတွေက အလန်ရှီးယားနဲ့ ခရစ္စဆပ်တန်ပါပဲ။ ‘SAS’ လို့ တင်စားခံခဲ့ရတဲ့ အလန်ရှီးယားနဲ့ ဆပ်တန်တို့ဟာ ၁၉၉၄-၉၅ ရာသီမှာ နှစ်ဦးပေါင်း (၄၉)ဂိုးအထိသွင်းခဲ့ပြီး ၁၉၁၄ နောက်ပိုင်းဝေးကွာခဲ့တဲ့ အမှတ်ပေးဖလားကို ရယူပေးခဲ့တယ်။
Filippo Inzaghi & Alessandro Del Piero (Juventus)
တစ်ချိန်က ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်ကို အကောင်းဆုံး ဦးဆောင်ခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက အင်ဇာဂီ၊ ဒယ်လ်ပီယာရိုတို့အပြင် ပြင်သစ် ဂန္ထ၀င်ကစားသမား ဇီဒန်း Zinedine Zidane တို့ရဲ့ ပေါင်းစပ်မှုကြောင့် ၁၉၉၇-၉၈ ရာသီမှာ အသင်းကို ချန်ပီယံလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲရောက်အောင် ပို့ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်။
Marcelo Salas & Christian Vieri (Lazio)
၂၀၀၀ ပတ်ဝန်းကျင်ကာလတွေမှာ လျှမ်းလျှမ်းတောက် ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ တိုက်စစ်မှူးတွေပါ။ မာဆယ်လိုဆာလက်စ်နဲ့ ဗီယာရီတို့ဟာ ၁၉၉၈-၉၉ ရာသီတုန်းက လာဇီယိုအသင်းမှာ တွဲဖက်ကစားခဲ့ပြီး (၁၅)ဂိုးစီ သွင်းယူခဲ့သလို စီးရီးအေမှာ အဆင့်(၂)နေရာရောက်အောင် ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်။ နှမြောဖို့ကောင်းတာက သူတို့နှစ်ဦးဟာ လာဇီယိုအသင်းမှာ တစ်ရာသီသာ ကစားခဲ့တာပါပဲ။
Andy Cole & Dwight Yorke (Man United)
မန်ယူအသင်း သမိုင်းတစ်လျှောက် အကောင်းဆုံးတိုက်စစ် အတွဲအဖက်တွေထဲမှာ အန်ဒီကိုးလ်နဲ့ ဒွိုက်ယော့ခ်အတွဲလည်း အပါအ၀င်ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၉၈-၉၉ ရာသီ မန်ယူအသင်းရဲ့ Treble Victory မှာ အန်ဒီကိုးလ်၊ ဒွိုက်ယော့ခ်တို့ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်က အဓိကျခဲ့တယ်။
Vincenzo Montella & Marco Delvecchio (Roma)
ရိုးမားအသင်းရဲ့ ရွှေခေတ်မှာ မွန်တဲလားနဲ့ ဒယ်လ်ဗက်ခီယို တိုက်စစ်အတွဲက အဓိကနေရာမှာ ပါဝင်ခဲ့တယ်။ သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ ပုံရိပ်တွေက ရိုးမားပရိသတ်တွေရဲ့ ရင်ထဲမှာ အမြဲတမ်းရှိနေဦးမှာပါ။
တစ်ခေတ်တစ်ခါတုန်းက ဘောလုံးလောကမှာ ထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့တဲ့ တိုက်စစ်အတွဲများ အကြောင်းကို အပိုင်း (၁)အဖြစ် ဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အပိုင်း(၂)ကိုလည်း ဆက်လက်ဖော်ပြသွားမှာဖြစ်လို့ စောင့်မျှော် ဖတ်ရှုကြပါဦး . .
Photo:dreamteamfc,Pinterest,Getty Images,Twitter,Al Arabiya English
တဈခတျေတဈခါတုနျးက ဘောလုံးလောကမှာ ထငျရှားကြျောကွားခဲ့တဲ့ တိုကျစဈအတှဲမြား (၁)
မျောဒနျဘောလုံးလောကမှာ (၄-၂-၃-၁)ကစားကှကျ ခတျေစားလာတာနဲ့အမြှ တိုကျစဈမှူး (၂)ဦးထား ကစားတဲ့ အသငျးတှေ သိပျမရှိတော့ဘူး။ အရငျကဆိုရငျ (၄-၄-၂) ကစားကှကျနဲ့ အောငျမွငျမှု ရယူခဲ့တဲ့ အသငျးတှေ အမြားကွီးရှိပွီး အဲဒီကစားကှကျနဲ့အတူ ထငျရှားကြျောကွားခဲ့တဲ့ တိုကျစဈအတှဲအဖကျတှလေညျး အမြားကွီးပါပဲ။ ဒါကွောငျ့ တဈခတျေတဈခါတုနျးက ဘောလုံးလောကမှာ ထငျရှားကြျောကွားခဲ့တဲ့ တိုကျစဈအတှဲအဖကျတှကေို ပရိသတျတှေ ပွနျ သတိရနိုငျဖို့အတှကျ ဖျောပွလိုကျရပါတယျ။
လီဗာပူးလျအသငျး အောငျမွငျမှုတှကေို ပွနျပွောရငျ အီယနျရပျရျှနဲ့ ဒဲဂလဈရျှတို့ရဲ့ အခနျးကဏ်ဍကို မထေ့ားလို့ မရဘူး။ ဒဲဂလဈရျှက ဘောလုံးစှမျးရညျ ပွညျ့ဝသူ၊ အီယနျရပျရျှက Pace ၊ Finishing Ability ကောငျးသူ။ သူတို့နှဈဦးက ၁၉၈၀ ဝနျးကငျြမှာ လီဗာပူးလျအသငျးအတှကျ အောငျမွငျမှုတှရေအောငျ ဦးဆောငျခဲ့သူတှလေို့ ဆိုရမှာပါ။
ပရီးမီးယားလိဂျ ခတျေဦးမှာ ဘလကျဘနျးအသငျးအတှကျ အမှတျပေးခနျြပီယံဆု ရရှိအောငျ အတှဲညီညီ ခွစှေမျးပွခဲ့သူတှကေ အလနျရှီးယားနဲ့ ခရစ်စဆပျတနျပါပဲ။ ‘SAS’ လို့ တငျစားခံခဲ့ရတဲ့ အလနျရှီးယားနဲ့ ဆပျတနျတို့ဟာ ၁၉၉၄-၉၅ ရာသီမှာ နှဈဦးပေါငျး (၄၉)ဂိုးအထိသှငျးခဲ့ပွီး ၁၉၁၄ နောကျပိုငျးဝေးကှာခဲ့တဲ့ အမှတျပေးဖလားကို ရယူပေးခဲ့တယျ။
တဈခြိနျက ဂြူဗငျတပျဈအသငျးရဲ့ တိုကျစဈကို အကောငျးဆုံး ဦးဆောငျခဲ့ကွသူတှဖွေဈပါတယျ။ အဲဒီတုနျးက အငျဇာဂီ၊ ဒယျလျပီယာရိုတို့အပွငျ ပွငျသဈ ဂန်ထဝငျကစားသမား ဇီဒနျး Zinedine Zidane တို့ရဲ့ ပေါငျးစပျမှုကွောငျ့ ၁၉၉၇-၉၈ ရာသီမှာ အသငျးကို ခနျြပီယံလိဂျဗိုလျလုပှဲရောကျအောငျ ပို့ဆောငျနိုငျခဲ့တယျ။
၂၀၀၀ ပတျဝနျးကငျြကာလတှမှော လြှမျးလြှမျးတောကျ ကြျောကွားခဲ့တဲ့ တိုကျစဈမှူးတှပေါ။ မာဆယျလိုဆာလကျဈနဲ့ ဗီယာရီတို့ဟာ ၁၉၉၈-၉၉ ရာသီတုနျးက လာဇီယိုအသငျးမှာ တှဲဖကျကစားခဲ့ပွီး (၁၅)ဂိုးစီ သှငျးယူခဲ့သလို စီးရီးအမှော အဆငျ့(၂)နရောရောကျအောငျ ပို့ဆောငျပေးခဲ့တယျ။ နှမွောဖို့ကောငျးတာက သူတို့နှဈဦးဟာ လာဇီယိုအသငျးမှာ တဈရာသီသာ ကစားခဲ့တာပါပဲ။
မနျယူအသငျး သမိုငျးတဈလြှောကျ အကောငျးဆုံးတိုကျစဈ အတှဲအဖကျတှထေဲမှာ အနျဒီကိုးလျနဲ့ ဒှိုကျယော့ချအတှဲလညျး အပါအဝငျဖွဈပါတယျ။ ၁၉၉၈-၉၉ ရာသီ မနျယူအသငျးရဲ့ Treble Victory မှာ အနျဒီကိုးလျ၊ ဒှိုကျယော့ချတို့ရဲ့ စှမျးဆောငျရညျက အဓိကခြဲ့တယျ။
ရိုးမားအသငျးရဲ့ ရှခေတျေမှာ မှနျတဲလားနဲ့ ဒယျလျဗကျခီယို တိုကျစဈအတှဲက အဓိကနရောမှာ ပါဝငျခဲ့တယျ။ သူတို့နှဈဦးရဲ့ ပုံရိပျတှကေ ရိုးမားပရိသတျတှရေဲ့ ရငျထဲမှာ အမွဲတမျးရှိနဦေးမှာပါ။
တဈခတျေတဈခါတုနျးက ဘောလုံးလောကမှာ ထငျရှားကြျောကွားခဲ့တဲ့ တိုကျစဈအတှဲမြား အကွောငျးကို အပိုငျး (၁)အဖွဈ ဖျောပွခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ အပိုငျး(၂)ကိုလညျး ဆကျလကျဖျောပွသှားမှာဖွဈလို့ စောငျ့မြှျော ဖတျရှုကွပါဦး . .
by Naing Linn . 24 mins ago
by Ko Kyue . 49 mins ago